Nyaya Youpenyu: Tinoda Kushumira Jehovha Chero Kwatanzi Tiende | Yokudzidza
Yakataurwa naMarkus naJanny Hartlief
Ndainge ndisati ndamboparidza ndega. Ndaitya chaizvo zvokuti makumbo angu aidedera pose pandaienda muushumiri. Chakaita kuti zviwedzere kuoma ndechokuti vanhu vomundima yacho vaisafarira zvachose. Vamwe vaiva nehasha dzisingaite uye vaitoda kundirova. Mumwedzi wandakatanga kupayona ndakangogovera kabhuku kamwe chete.—Markus.
IZVOZVO zvakaitika muna 1949, makore anodarika 60 akapfuura, asi nyaya yangu inotangira makore akawanda kupfuura ipapo. Baba vangu Hendrik, vaiita basa rokugadzira shangu uye vaishanda mugadheni kuDonderen, musha muduku waiva kuchamhembe muDrenthe kuNetherlands. Ikoko ndiko kwandakaberekerwa muna 1927 uye ndiri wechina pavana vanomwe. Imba yedu yaiva pedyo nemugwagwa usina tara kumaruwa. Vavakidzani vedu vakawanda vaiva varimi uye ndainakidzwa noupenyu hwokumaruwa. Chokwadi ndakatanga kuchinzwa muna 1947, ndiine makore 19, kubva kune muvakidzani wedu ainzi Theunis Been. Ndinoyeuka kuti pandakatanga kuona Theunis handina kumufarira, asi Hondo Yenyika II ichangopera, akava Chapupu chaJehovha uye ndakaona kuti ainge ava noushamwari chaizvo kupfuura zvaaiva. Izvozvo zvakaita kuti ndide kuziva zvakawanda, saka ndakateerera paaindiudza nezvevimbiso yaMwari yenyika inenge yava paradhiso. Ndakabva ndangogamuchira chokwadi uye kubva ipapo takava shamwari. *
Ndakatanga kuparidza muna May 1948, uye mwedzi wakatevera, musi wa20 June, ndakabhabhatidzwa pagungano rakaitwa muUtrecht. Ndakatanga kupayona musi wa1 January 1949, uye ndakanzi ndinopayona kuBorculo, iri kumabvazuva kweNetherlands kwaiva neungano duku. Rwendo rwacho rwaiva rwemakiromita 130 saka ndakasarudza kuenda nebhasikoro. Ndaifunga kuti ndaizotora maawa matanhatu asi nokuti kwainaya chaizvo uye kwaiva nemhepo ine simba, ndakazotora maawa 12, kunyange zvazvo ndakazokwira chitima makiromita 90 ainge asara. Ndakazosvika pamba pemhuri yeZvapupu patova pakati pousiku, uye mhuri iyi ndiyo yandakagara nayo ndichipayona munharaunda iyoyo.
Makore iwayo hondo ichangopera, vanhu vaiva nezvinhu zvishoma. Ndaingova nesutu imwe chete uye tirauzi rimwe chete, sutu yacho yainge yakakurisa uye tirauzi racho raiva pfupi. Sezviri patangira nyaya ino, mwedzi wokutanga kuBorculo wainge wakaoma, asi Jehovha akandikomborera nevadzidzi veBhaibheri vakawanda. Papera mwedzi mipfumbamwe, ndakanzi ndinopayona ndiri kuAmsterdam.
KUBVA KUMARUWA NDICHIENDA KUGUTA
Ndainge ndakurira mudunhu raiitwa zvokurimwa, asi iye zvino ndainge ndava kugara muguta guru reNetherlands rinonzi Amsterdam. Vanhu vaifarira chaizvo ushumiri hwedu. Mumwedzi wokutanga, ndakagovera mabhuku akawanda kupfuura andainge ndagovera mumwedzi mipfumbamwe yainge yadarika. Ndainge ndava kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri zvinopfuura zvisere. Ndichangogadzwa kuva muranda weungano (ava kunzi murongi mudare revakuru), ndakapiwa hurukuro yavose kokutanga. Ndaitya chaizvo, saka ndakafara chaizvo pandakanzi ndinopayona ndiri kune imwe ungano, zuva rangu rokupa hurukuro rava kutosvika. Ndaisaziva kuti makore aitevera ndaizopa hurukuro dzinopfuura 5 000!
Markus (kurudyi) achiparidza mumugwagwa pedyo neAmsterdam muna 1950
Muna May 1950, ndakanzi ndiende kuHaarlem. Ndava ikoko, ndakagamuchira tsamba yaindikumbira kuti ndive mutariri wedunhu. Kwemazuva matatu, ndaishaya hope. Ndakaudza imwe hama yaishanda kuhofisi yebazi yainzi Robert Winkler kuti ndainzwa sokuti handikodzeri, asi yakandiudza kuti: “Chingozadza mapepa acho. Uchadzidzira.” Pasina nguva, ndakadzidziswa kwemwedzi uye ndakatanga kushanda semubatiri (mutariri) wedunhu. Pandakashanyira imwe ungano, ndakaona Janny Taatgen, mumwe piyona wechiduku aifara chaizvo aida Jehovha uye aizvipira. Takaroorana muna 1955. Asi ndisati ndaenderera nenyaya yangu, Janny achataurawo kuti akava sei piyona uye kuti takashanda sei pamwe chete taroorana.
KUSHUMIRA SOMURUME NOMUDZIMAI
Janny: Amai vangu vakava Chapupu muna 1945 ndiine makore 11. Vakabva vangoona kukosha kwokudzidza Bhaibheri nevana vavo vatatu, asi baba vangu vaisatombofarira chokwadi, saka vaitidzidzisa kana baba vasiri pamba.
Ndakatanga nokupinda gungano rakaitwa kuThe Hague muna 1950. Vhiki rakatevera racho, ndakapinda musangano wangu wokutanga paImba yoUmambo yekwandaigara, muAssen kuDrenthe. Baba vangu vakagumbuka chaizvo uye vakandidzinga pamba. Amai vakati, “Unoziva kwokunogara.” Ndakaziva kuti vaireva kudzimba dzehama nehanzvadzi. Ndakanogara nemhuri yeZvapupu yaigara pedyo nesu, asi baba vangu vaingoramba vachindiomesera, saka ndakazoenda kune imwe ungano yaiva muDeventer kuOverijssel, yaiva kure nemakiromita 95. Asi ndainge ndichiri muduku, saka baba vangu vakatanga kunetswa nehurumende nokuti vainge vandidzinga pamba. Saka vakazonditi ndidzoke. Kunyange zvazvo baba vangu vasina kuzova Chapupu, vakazondibvumira kupinda misangano yose uye kuparidza.
Janny (kurudyi) achiita upiyona hwezororo muna 1952
Ndichangodzoka kumba, amai vakarwara chaizvo uye ndaitofanira kuita mabasa ose epamba. Asi ndakaramba ndichifambira mberi pakunamata uye ndakabhabhatidzwa muna 1951 ndiine makore 17. Muna 1952, amai pavainge vanaya, ndakatanga kupayona nedzimwe hanzvadzi nhatu kwemwedzi miviri ndiri piyona wezororo (webetsero). Taigara muchikepe uye taiparidza mumaguta maviri omuDrenthe. Ndakava piyona wenguva dzose muna 1953. Papfuura gore, mumwe mutariri wedunhu wechiduku akashanyira ungano yedu. Aiva Markus. Takaroorana muna May 1955, sezvo takaona kuti taigona kushumira Jehovha zviri nani tiri murume nomudzimai.—Mup. 4:9-12.
Musi watakachata muna 1955
Markus: Tichangochata, takanzi tinoshumira semapiyona muVeendam kuGroningen. Taigara mukamba kaduku kainge kakareba mamita anenge matatu uye kakafara mamita anenge maviri. Asi Janny akaita kuti kamba kacho kataridzike zvakanaka. Manheru oga oga taibvisa tafura nemacheya maduku maviri kuti tidzikise mubhedha wataimisa kumadziro.
Papfuura mwedzi mitanhatu, takakumbirwa kuti tipinde mubasa redunhu kuBelgium. Muna 1955, munyika iyoyo maingova nevaparidzi 4 000. Iye zvino nhamba iyoyo yapetwa katanhatu. Vanhu vanogara muFlanders kuchamhembe kweBelgium, vanotaura mutauro wakafanana newokuNetherlands. Asi matauriro evanhu vokuBelgium akasiyana chaizvo neevanhu vokuNetherlands, saka taifanira kudzidzira matauriro avo.
Janny: Basa redunhu rinoda kunyatsozvipira. Taishanyira ungano nemabhasikoro uye taigara mudzimba dzehama nehanzvadzi. Sezvo taisava nepokugara pataipedza kushanyira ungano, tairamba tiripo kusvika musi weMuvhuro, tozoenda kune imwe ungano Chipiri mangwanani. Asi taigara tichiona basa redu sechikomborero chinobva kuna Jehovha.
Markus: Pakutanga, taisamboziva hama nehanzvadzi dzomuungano dzataishanyira, asi dzaiva nemutsa chaizvo uye dzaitigamuchira. (VaH. 13:2) Mumakore iwayo, takashanyira kakawanda ungano dzose dzaitaura chiDutch dziri muBelgium. Izvi zvakaita kuti tive nemakomborero akawanda. Somuenzaniso, takasvika pakuziva dzinenge hama nehanzvadzi dzose dzomudunhu rechiDutch, uye takapedzisira tava kudzida chaizvo. Takaona mazana evechiduku vachikura, vachifambira mberi pakunamata uye vachizvitsaurira kuna Jehovha, vachiisa Umambo pokutanga muupenyu hwavo. Zvinofadza chaizvo kuona vakawanda vavo vachishumira Jehovha vakatendeka mubasa renguva yakazara. (3 Joh. 4) ‘Kukurudzirana’ kwakadai kwakaita kuti zvitiitire nyore kuramba tichiita basa redu nemwoyo wose.—VaR. 1:12.
CHISARUDZO CHAKAOMA UYE CHIKOMBORERO
Markus: Kubva patakaroorana, taiva nechido chokuenda kuChikoro cheGiriyedhi. Zuva nezuva taidzidzira Chirungu kweinenge awa. Asi zvaisava nyore kudzidzira Chirungu tichishandisa mabhuku, saka takasarudza kuenda kuEngland pataiva pazororo kuti tinodzidzira mutauro uyu patinenge tichiparidza ikoko. Muna 1963 takazogamuchira hamvuropu yaibva kumuzinda wedu kuBrooklyn. Yaiva netsamba mbiri, yangu neyaJanny. Mutsamba yangu, ndaikokwa kunopinda kirasi yeGiriyedhi yaizotora mwedzi gumi. Chikoro chacho chainyanya kuitirwa kudzidzisa hama uye kudzipa mirayiridzo yesangano. Saka pavadzidzi 100 vakakokwa, 82 vacho vaiva hama.
Janny: Mutsamba yandakagamuchira zuva iroro, ndaikumbirwa kunyengetera uye kufungisisa kana ndaibvuma kusara kuBelgium paizoenda Markus kuGiriyedhi. Chokwadi ndechokuti pakutanga ndakarwadziwa. Zvakaita sokuti zvose zvandaiedza kuita kuti ndikwanise kuendawo hazvina kukomborerwa naJehovha. Kunyange zvakadaro, ndakayeuka kuti chinangwa cheChikoro cheGiriyedhi ndechokubatsira vaya vanopinda kuti vaite zvakawanda mubasa rokuparidza mashoko akanaka munyika yose. Saka ndakabvuma kusara uye ndakanzi ndinoshumira sapiyona chaiye muguta riri muBelgium rinonzi Ghent pamwe chete naAnna uye Maria Colpaert, vaiva mapiyona chaiwo ainge agara nebasa.
Markus: Ndaifanira kuvandudza Chirungu, saka ndakakokwa kuti ndiende kuBrooklyn kwemwedzi mishanu ndisati ndatanga chikoro. Ndakashanda muDhipatimendi Rinotumira Mabhuku uye Dhipatimendi Rebasa. Kushanda pamuzinda wedu uye kubatsira pakutumira mabhuku kuAsia, Europe, neSouth America kwakaita kuti ndizive zvakawanda nezvesangano rehama riri munyika yose. Ndinonyanya kuyeuka Hama A. H. Macmillan, vaimbova mubasa roupilgrim (mutariri wedunhu) mumazuva aHama Russell. Panguva iyoyo vainge vakura uye vava matsi asi vaipinda misangano yose yeungano. Izvozvo zvakandibaya mwoyo uye zvakandidzidzisa kuti tinofanira kukoshesa kuungana kwatinoita nehama dzedu dzechiKristu.—VaH. 10:24, 25.
Janny: Ini naMarkus tainyorerana tsamba kakawanda pavhiki. Taisuwana chaizvo! Asi Markus ainakidzwa nokudzidziswa kwaaiitwa kuGiriyedhi, uye ndaiwana mufaro wechokwadi muushumiri. Markus paakazodzoka achibva kuUnited States, ndainge ndava kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri 17! Ichokwadi kuti zvainge zvakaoma kuparadzana kwemwedzi 15, asi ndakakwanisa kuona kuti Jehovha akatikomborera nokuzvipira kwatakaita. Zuva rakadzoka Markus, ndege yakanonoka nemaawa akawanda, saka paakazosvika, takachema takambundirana. Kubvira ipapo, hatina kuzomboparadzana zvakare.
TINOONGA ROPAFADZO DZOSE DZATAKAWANA
Markus: Pandakadzoka kubva kuGiriyedhi muna December 1964, takanzi tinoshanda kuBheteri. Hatina kuziva kuti taisazoshanda paBheteri kweupenyu hwedu hwose. Pangopera mwedzi mitatu chete, takanzi tipinde mubasa reruwa kuFlanders. Pakatumirwa mamishinari maviri kuBelgium, Aalzen naEls Wiegersma, vakanzi vapinde mubasa reruwa, uye takabva tadzokera kuBheteri kwandakanoshanda muDhipatimendi Rebasa. Kubva muna 1968 kusvika muna 1980, takachinjwa kakawanda, taimboti tikashanda paBheteri todzoka mubasa rokufambira. Kubva muna 1980 kusvika muna 2005, ndakashumirazve semutariri weruwa.
Kunyange zvazvo mabasa edu aigara achichinja, hatina kumbobvira takanganwa kuti takatsaurira upenyu hwedu kuti tishumire Jehovha nemwoyo wose. Taifadzwa nebasa rose rataipiwa tichivimba kuti kuchinjwa kwose kwataiitwa mubasa redu kwaiva nechinangwa chokuti basa roUmambo rienderere mberi.
Janny: Ndakanyanya kunakidzwa neropafadzo yokuenda naMarkus kuBrooklyn muna 1977 uye kuPatterson muna 1997 kwaakanodzidziswa senhengo yeDare reBazi.
JEHOVHA ANOZIVA ZVATINODA
Markus: Muna 1982, Janny akaitwa oparesheni uye akapora. Papera makore matatu, ungano yeLouvain yakatiti tigare muimba yaiva pamusoro peImba yoUmambo yavo. Aka ndiko kaiva kokutanga kuva nemba yataiti ndiyo yeduwo pashure pemakore 30. Chipiri chega chega, patairongedza kuti tishanyire ungano, ndaidzika nokukwira masitepisi 54 kuti ndiise mabhegi edu pasi! Tinoonga chaizvo kuti muna 2002, pakaitwa urongwa hwokuti tive neimba yepasi. Pandakasvitsa makore 78, takanzi tinoshumira semapiyona chaiwo muguta reLokeren. Tinofara chaizvo kuti tinogona kushumira semapiyona chaiwo uye kuti tichiri kukwanisa kuenda muushumiri mazuva ose.
“Tinonyatsobvuma kuti hazvina basa kuti tinoshumira tiri kupi kana kuti tinoita basa rei asi kuti tinoshumira ani”
Janny: Kana tikasanganisa makore atapedzera mubasa renguva yakazara tiri vaviri anopfuura 120! Tanyatsozvionera kuti vimbiso yaJehovha ndeyechokwadi yokuti ‘haangambotiregi’ uye kana tichimushumira takatendeka ‘hapana chatingashayiwa.’—VaH. 13:5; Dheut. 2:7.
Markus: Pataiva vaduku, takazvitsaurira kuna Jehovha. Hatina kumbozvitsvakira zvinhu zvikuru. Tave tiine chido chokuita chero basa ratinopiwa nokuti tinonyatsobvuma kuti hazvina basa kuti tinoshumira tiri kupi kana kuti tinoita basa rei asi kuti tinoshumira ani.
^ ndima 5 Kubva ipapo, baba, amai, hanzvadzi yangu, uye vanun’una vangu vaviri vakavawo Zvapupu.